Diarra Oo Lagu Khasbay Inuu Beeniyo Wararka Sheegaya Inuu Ka Mid Noqday Dagaal-yahanada Suuriya
HomeKuwo KaleDiarra Oo Lagu Khasbay Inuu Beeniyo Wararka Sheegaya Inuu Ka Mid Noqday Dagaal-yahanada Suuriya
Ciyaaryahankii hore ee kooxda Arsenal, Lassana Diarra ayay khasab ku noqotay inuu beeniyo wararka sheegaya inuu isaga yahay, ninka ku dooday inuu ahaa ciyaaryahan hore ugu soo ciyaaray Gunners , hadana dagaal yahan ah ku jira koox ka mid ah kooxaha dagaalka ka wada wadanka Suuriya.
Garyaqaanka ciyaaryahankan xulka Faransiiska ka tirsanaan jiray ee Diara oo magaciisa la yidhaahdo Eric Dupond-Moretti, ayaa sheegay inuu Lassana Been iyo waxba kama jiraan ku tilmaamayo wararka la isla dhex marayo ee sheegaya inuu u talaabay dhinaca Syria.
Diarra ayaa wakhti xaadirkan ah ciyaaryahan ka tirsan kooxda Ruushka ah ee Lokomotiv Moscow .waxaanu ku yidhi hadalkiisa garyaqaan Dupond-Moretti : ‘Waligii cag ma dhigin Syria. Waa been abuur. Maaha nin jihaad dagaal ku jira ee waa ciyaaryahan kubada cagta ah oo ka tirsan naadiga Lokomotiv Moscow.’
Warar ku baahay shabakadaha bulshada ee Inter-net ka ayaa ku shaanbadeeyey Diara inuu ahaa ninkii cajalada ka soo baxay ee sheeganayay inuu hore u ahaa ciyaaryahan Arsenal ka tirsan hadana uu jihaad daraadii u joogo Suuriya oo uu yahay Muslim xaq u dirir ah.
Waxay ahayd uun todobaad ka hor markii Muuqaalo ‘video’ lagu baahiyey website ay leeyihiin koox dagaalyahano ah oo lagu magacaabo “ISIS”- Islamic State of Iraq and Syria – (xukuumada Islaamiga ah Ee Ciraaq & Suuriya), uu nin sheegtay inuu ku dhashay Portugal una soo ciyaaray kooxda woqooyiga London ka dhisan ee Arsenal uu magaciisa ku sheegay ‘Abu Issa Al-Andalusi’.
Taas ayaana keentay in Dad badani ku nabaan in ninkaas wajiga duubnaa , qoriga AK47 ka ahna bogga ku haystay uu yahay Lassana Diara.
Bayern Munich oo Horyaalkii 25 aad Ee Bundesliga ah Ku Guuleysatay